मकवानपुर र गोरखाबाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ अब सिन्धुलीबाट चुनाव लड्ने - Janadesh Khabar
मकवानपुर र गोरखाबाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ अब सिन्धुलीबाट चुनाव लड्ने
जनादेश खबर	काठमाडौं	असार १, २०७८
नारायणकाजी श्रेष्ठ निरन्तर सर्लाही ३ निर्वाचन क्षेत्रमा आउने, जाने गरिरहेका छन् । उनले अहिले पनि यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री लिएर आएका छन् । सर्लाही र यस वरपर क्षेत्रका जनताले नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी निर्वाचनमा यो क्षेत्रलाई ताकेको अर्थमा लिएका छन् । यस क्षेत्रमा रामेश्वर राय यादवले यसअघि जितेका हुन । रामेश्वर सर्लाही-४ मा जाने र श्रेष्ठ सर्लाही-३ मा लड्ने तयारी गरेको चर्चा छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचन अहिलेसम्म जितेका छैनन् । एकपटक मकवानपुरमा निर्वाचन लडे तर हारे । अर्को पटक उनी गोरखामा डा. बाबुराम भट्टराईसँग लडे त्यहाँ पनि हारे । त्यसपछि उनी राष्ट्रियसभाको सदस्यको निर्वाचन लडे ।
निर्वाचन हारेर पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गएको भनेर उनी र वामदेव गौतमको पार्टीभित्र मात्र होइन सर्वत्र धेरै विरोध भयो । नारायणकाजी श्रेष्ठ गण्डकी क्षेत्रबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा चुनिएर आए ।
२०७६ साल माघमा उनी छ वर्षका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यमा जिते पनि आगामी प्रतिनिधिसभामा उनी किन उठ्न चाहे ? धेरैले प्रश्न गरेका छन् ।
उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नउठेर अरु कुनै एक पुराना कमरेडलाई उठाएर अर्को पटक प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि तयारी गर्न धेरैले सुझाव दिएका थिए । उनी पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाले उनले सांसद नभएर पनि पार्टीको धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नसक्थे ।
प्रतिनिधिसभामा उठ्ने, हारेपछि राष्ट्रियसभामा जाने र राष्ट्रियसभाको कार्यकाल नसकिदैं फेरि प्रतिनिधिसभामा उठ्ने तरिकाले पार्टी, समग्र नेतृत्वको, उनको पनि शाख गिर्नेछ ।
सर्लाहीमा काम सकेर नारायणकाजी श्रेष्ठ महोत्तरीको बर्दिवासमा दुई दिनदेखि बसेका छन् । उनले आफ्नो समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई भेटेका छन् ।
प्रदेश दुईमा मन्त्रीका लागि भरत साह र जगत यादवलाई बनाउने र त्यसका लागि शपथ ग्रहणको तयारी गर्दा प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर तत्काल रोक्न र आफ्नो समूहको पनि एक जना बनाउन दवाव दिएको समाचार यसअघि नै प्रसारित भएको थियो ।
१ असार २०७८, मंगलवार १६:४० बजे प्रकाशित
माधव नेपाल निवास कोटेश्वरबाट बाहिरिए प्रचण्ड , मुहारमा खुशी देखिएन
गुल्मीमा अविरल वर्षा
लिखित राजीनामा तयार पार्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने तयारी
फेरि सर्ने भयो मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण मिती
एमालेमा बादलको बरियता घटाइयो